अब घोक्रेठ्याक हुने पालो कांग्रेसको :: NepalPlus
नेपाली कांग्रेसभित्र असल मानिसहरु छैन भन्नु हुँदैन पक्कै पनि। तर मुल रुपमा त्यो पार्टीको नेत्रित्व सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैन। शक्तिबाट उ अलग हुनै सक्दैन। यो कुरा अघिल्ला ब्लगहरुमा पनि पटकपटक उल्लेख भएकै हो। सत्ताबाहिर बस्यो कि अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने उसको विश्वास छ सायद। सत्ताको कुर्सि छोड्नु भनेको माछोले पानी छोड्नु सरह हो कांग्रेसकालागि। हुनत लुट्न बानी लागेकाहरु सत्ता बाहिर बसेर के गर्ने? सत्ता बाहिर बसे लुट्न पाइँदैन। ठग्न पाइँदैन। रातारात भ्रष्टाचार गरेर देश कंगाल गर्न पाइदैन। लुट, भ्रष्टाचार, ठगि, कुशासन, नाताबाद र हैकम चलाउनपनि पाइँदैन। त्यसैले उ जसरिपनि, जुन मुल्य चुकाएर भएपनि सत्तामा टास्सिइरहन चाहन्छ। देशको भविषय होइन आफ्नो हातमा सत्ताको भविष्य प्रमुख हो नेपाली कांग्रेसकालागि। उ प्रजातन्त्रका नाममा एकतन्त्र चलाउन खोज्छ। सत्ता र शक्ति बाहिर नेपाली कांग्रेस नत बर्तमान भेट्छ, न त भविष्य नै देख्छ।
२०४६ साल पछि देश लुटेको उसले झल्झली देखिरहेको छ। त्यसैले नेपाली जनताले शासनकालागि अयोग्य ठानेको उ फेरी बखेडा झिक्दै छ। जनताले स्पष्ठ रुपमा माओवादीलाई बहुमत दिए। उसको शासन चाख्न खोजे। उसको हैसियत बुझ्न खोजे। शान्तिपूर्ण मार्ग नबिथलियोस भन्ने कामनापनि गरे। तर नेपाली कांग्रेस त्यो यथार्थलाई लत्याएर दुई तिहाई नभएकाले नेपाली कांग्रेसलेनै सरकार को नेत्रित्व गर्नुपर्छ भनेर आधारहिन तर्क अगाडि सार्दै छ।
जनताबाट शासन गर्न अयोग्य ठानिएको पार्टी जबर्जस्त सरकार चलाउँछु भनेर भाँडभैलो मच्चाउन खोज्दै छ। यो भनेको हिन्दि भाषाको “लातोँ का भुत बातोँ से नही मान्ति है” भने जस्तै हो। सरकार चलाउने नैतिकता गुमाउँदापनि सरकार हाँक्न जबर्जस्त तम्सिनेलाई गर्ने के? त्यहि हिन्दी उखान झैं गर्नुपर्छ सायद। उसलाई सरकार चलाउने नेत्रित्व होइन कि गल्हत्याएर निकाल्नुपर्छ। नेपाली जनताले उसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने मत दिएकाले थेचारेर भएपनि राख्नुपर्छ। सके माओवादीले उसलाई थेचार्छ नसके राजा ज्ञानेन्द्रलाई थेचार्ने नेपालीले जुनसुकै शक्तिलाईपनि बाँकी राख्नु हुदैन । राख्दैननपनि। कांग्रेसले बेलैमा चेतेको राम्रो।